I-Stone house Studio- inhliziyo ye-Split - I-Airbnb
I-Stone house Studio- inhliziyo ye-Split
Split, Splitsko-dalmatinska županija, i-Croatia
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Antonia
U-Antonia Ungumbungazi ovelele
Ifulethi le-Studio liyingxenye yendlu yamatshe endala nemvelaphi enkabeni ye-Old Town yaseSplit. Itholakala endaweni yaseDobrić, eyaqanjwa ngesiphethu samanzi okuphuza - amanzi "amahle" (amahle) ayeseduze nendlu yethu. Itholakala eduze kwe-Furit square (Voćni trg), eduze kakhulu ne-Diocletian's Palace kanye nezinyathelo ezimbalwa nje ukusuka ku-promenade yase-Riva.
NGENXA YE-CORONAVIRUS SICELA U-RADE UMZIMBA WETHU WOKUHLANZA ENCAZELO YEPROPATI.
Ifulethi le-Studio liyingxenye yendlu yamatshe endala enhliziyweni yedolobha lase-Old. Isanda kulungiswa ngoMeyi 2020. futhi ingaba yikhaya leholide elihle labantu abangu-2.
I-Studio (35m2) inekhishi (lincane, kodwa ikhishi elihlome kahle kakhulu), igumbi lokugezela elineshawa ebanzi negumbi lokulala elinombhede omkhulu okabili.
Inedeski elinesihlalo esithokomele, ngakho lilungele uhambo lomsebenzi.
Kukhona i-air coditioning ne-WIFI. Futhi, kukhona ithuba lokuzihlola.
Kusukela osukwini lokuqala lokuqasha, ukuhlanzeka kuyinto eza kuqala kithi 'esiyinombolo yokuqala', okubonakala ekubuyekezweni kwezihambeli zethu kanye nesimo sababungazi abakhulu ukuthi sinesikhathi eside kakhulu. (uma ngithi 'thina' ngicabanga ngami nomndeni wami esizinakekela mathupha impahla yethu). Ngenxa yesimo se-coronavirus (covid 19), sinesidingo sokukhomba esihlale sikwenza lapho sihlanza:
- geza wonke amalineni namathawula ekushiseni okuphezulu (90 celsius degree)
- Hlanza yonke indawo ekhishini nasemagunjini (okuhlanganisa nezingubo zasebusuku, ifenisha, izinto zokuswayipha, izinkinobho zeminyango nezilawuli kude)
- hlinzeka ngensipho yesandla, iphepha lasendlini yangasese namathawula ephepha
- Sicoca phansi kuwo wonke amagumbi futhi ngemva kwalokho siyawasha
- bulala amagciwane ezindaweni zokugezela kanye nephansi
- amakamelo anomoya
NGENXA YE-CORONAVIRUS sithembisa ukuthi sizonaka okwengeziwe UMA SIHLANZA, okusho ukuthi sizohlanza izinto ezingcolile njengoba sivame ukuhlanza (okubhalwe ngenhla) nokuthi sizokwenza ukuhlanza okwengeziwe:
- bulala amagciwane kuwo wonke ama-srufaces avame ukuthintwa endlini yonke
- hlinzeka ngesibulali magciwane ngezandla emnyango
- hlinzeka ngezinto ezihlukile ongazisebenzisa
- sizosusa zonke izinto ezingadingekile efulethini ezingathintwa njalo (njengezincwadi nomagazini esivame ukukunikeza)
- sizosusa amaragi emakamelweni ukuze siphephe okwengeziwe (noma sibeke lawo angawashwa emshinini wokuwasha)
- faka umoya amakamelo isikhathi eside ngangokunokwenzeka
- beka imiyalelo yezivakashi zethu
- njengoba sinenketho yokuzihlola ngokhiye we-lockbox singakwazi ukunciphisa ukuthintana komuntu nomuntu ngaphandle kokukwamukela (okhiye nebhokisi lokukhiya lokhiye kuzophinde kubulawe amagciwane)
Ekugcineni - sonke sifuna ukuhlala sinempilo futhi siphephile. Sizosinakekela kanye NAWE ngokugcina impahla yethu ihlanzekile.
Indawo yakhiwe ngezindlu zamatshe eziyimvelaphi ehlukaniswe nemigwaqo emincane futhi akukho kufinyelela ezimotweni. Kule migwaqo kunezindawo eziningi zokudlela ezincane ezifuywayo ezinomsuka wokudla kwama-dalmatians, enye yazo ibhekene ngqo nefulethi. I-Riva ingaphansi kwama-40m ukusuka efulethini futhi ibhishi i-Bacvice, ibhishi elidume kakhulu e-Split, liyimizuzu eyi-10-15 ukusuka efulethini futhi ebusuku liphenduka libe ngenye yezindawo ezithakazelisa kakhulu zokuphuma ebusuku. Futhi kukhona amaminithi angu-2 kuphela uma uhamba ngezinyawo uye emakethe yezinhlanzi kanye nemakethe evulekile ebizwa ngokuthi "pazàr" (imakethe evulekile enezithelo ezintsha, imifino kanye nomkhiqizo ojwayelekile) .Isuphamakethe, ibhikawozi, izindawo zokudlela ezisheshayo kanye nezindawo zokudlela zekhofi kuseduze kakhulu nefulethi (1 -2 amaminithi ukuhamba)
Sinenketho yokuzihlola (ngokukhiya okuphephile), kodwa ngokuvamile ngamukela izivakashi zami lapho ngifika ukuze ngihlangane nawe futhi ngikunikeze lonke ulwazi oludingayo ukuze uhlale unethezekile e-Split.
Uma ngingakwazi ukukwamukela, cishe ngizoza kamuva ngizokuhlangabeza futhi ngikusize, kunjalo - uma udinga ukuthi ngize.
Ngihlala ngitholakala ngohlelo lokusebenza lwe-airbnb noma ifoni.
Sinenketho yokuzihlola (ngokukhiya okuphephile), kodwa ngokuvamile ngamukela izivakashi zami lapho ngifika ukuze ngihlangane nawe futhi ngikunikeze lonke ulwazi oludingayo ukuze uh…
UAntonia Ungumbungazi ovelele